ရန်​ကုန်​စည်​ပင်​နယ်​နမိတ်အတွင်း ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းခွင့်... | CarsDB
ရန်​ကုန်​စည်​ပင်​နယ်​နမိတ်အတွင်း ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းခွင့်ပေးမည်ဆိုပါက ဥပေ​ဒနဲ့အညီစီးနင်းရမှာဖြစ်​
ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီးတွင်​ ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းခွင့်​​ပေးမည်​ဆိုပါက ဥပ​ဒေနဲ့အညီစီးနင်းရမှာဖြစ်​ပါတယ်​လို့. ယာဉ်​ထိန်းရဲတပ်​ဖွဲ့က​​ပြောပါတယ်​။
ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီလွှတ်​​တော်​အစည်းအ​ဝေးတွင်​ ​ရွှေပြည်​သာမဲဆန္ဒနယ်​လွတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​​က ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီးအတွင်း ဆင်​​ခြေဖုန်းမြို့နယ်​များတွင်​အ​ရေးပါ​သော ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းမှူကို ခွင့်ပြုပေးရန်အစီအစဉ်​ရှိမရှိ ​မေးမြန်​ခဲ့ရာ ​လမ်းပန်းဆက်​သွယ်​​ရေးဝန်​ကြီး ​ဒေါ်နီလာ​ကျော်​က ဆိုင်ကယ်​​စီးနင်းခွင့်ပြုရန် ​စပ်ဆပ်ဌာနေ​​တွနဲ့​ဆွေး​နွေးမှူများလုပ်​​ဆောင်​​နေပါတယ်​လို့​ပြောထားပါတယ်​။ ထို့ကဲ့သို့ ဆိုက်​ကယ်​စီးနင်းခွင့်ကိုတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုပေးမည်​ဆိုလျှင်​လည်း ယာဉ်​စည်းကမ်းဥပ​ဒေအရသာလုပ်​​ဆောင်​သွားမှာဖြစ်​တယ်​လို့ယာဉ်​ထိန်းရဲတပ်​ဖွဲ့က​ပြောခဲ့ပါတယ်​။
ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းခွင့်ပြုမည်ည်​ဆိုရာတွင်​ မြို့အစွန်​​နေရာများတွင်​သာစီးနင်းခွင်ပေးမည်ဖြစ်​ရာ စည်​ကမ်းချက်​များနဲ့အညီလုပ်​​ဆောင်​မှာဖြစ်​တယ်​လို့သိရပါတယ်​။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ဆိုငျကယျစီးနငျးခှငျ့ပေးမညျဆိုပါက ဥပဒနေဲ့အညီစီးနငျးရမှာဖွဈပါတယျလို့. ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့ကပွောပါတယျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီလှတျတျောအစညျးအဝေးတှငျ ရှပွေညျသာမဲဆန်ဒနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျက ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ဆငျခွဖေုနျးမွို့နယျမြားတှငျအရေးပါသော ဆိုငျကယျစီးနငျးမှူကို ခှငျ့ပွုပေးရနျအစီအစဉျရှိမရှိ မေးမွနျခဲ့ရာ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးဝနျကွီး ဒျေါနီလာကြျောက ဆိုငျကယျစီးနငျးခှငျ့ပွုရနျ စပျဆပျဌာနတှနေဲ့ဆှေးနှေးမှူမြားလုပျဆောငျနပေါတယျလို့ပွောထားပါတယျ။ ထို့ကဲ့သို့ ဆိုကျကယျစီးနငျးခှငျ့ကိုတိုငျးဒသေကွီးအစိုးအဖှဲ့က ခှငျ့ပွုပေးမညျဆိုလြှငျလညျး ယာဉျစညျးကမျးဥပဒအေရသာလုပျဆောငျသှားမှာဖွဈတယျလို့ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့ကပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆိုငျကယျစီးနငျးခှငျ့ပွုမညျညျဆိုရာတှငျ မွို့အစှနျနရောမြားတှငျသာစီးနငျးခှငျပေးမညျဖွဈရာ စညျကမျးခကျြမြားနဲ့အညီလုပျဆောငျမှာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
Posted at: 17-10-2016 10:55 AM